Anyị na-anọgide na-arụ ọrụ na njikarịcha ndu anyị maka ndị ahịa anyị. Ọ bụ ezie na anyị na-enyocha ma na-enye ndị ahịa anyị ihe na-ezighị ezi na ihe kpatara na ọ dị njọ, ọ dị mkpa na anyị ga-enyekwa nduzi na otú mezie okwu.
Mgbe anyị na -enyocha ndị ahịa anyị, ọ na -eju anyị anya mgbe niile maka obere mbọ a na -etinye iji kwalite ọnụnọ Youtube ha yana ozi metụtara ya na vidiyo ha na -ebugo. Ọtụtụ na -ebugo vidiyo ahụ, tọọ aha ya wee pụọ. Youtube bụ igwe ọchụchọ nke abụọ kacha ukwuu n'azụ Google ma na -enyekwa ibe nsonaazụ Google Search Engine. Ime ka vidiyo gị dị mma ga -agba mbọ hụ na a na -ahụ vidiyo gị ọ bụla na nchọta dị mkpa.
Okirikiri nhọrọ ukwuu - Hazie ihe na -adọkpụ ọwa na vidiyo gị gosipụtara maka ndị debanyere aha. Jide n'aka ịgbakwunye ngalaba agbapụtara - ọ bụrụ na ị nwere ụdị vidiyo dị iche iche, nke a bụ ebe dị mma iji tinye vidiyo ọhụrụ gị na nke ọ bụla tinye listi ọkpụkpọ.
mbọn - Tinye foto maka ọwa gị, ọkachasị akara ngosi gị, ahaziri maka ngosi onyonyo gburugburu. Tinye onyonyo ọkọlọtọ nke opekata mpe pikselụ 2048 x 1152 mana lezienụ anya ka esi egosipụta onyonyo na mmepụta ọ bụla. YouTube na -enye gị ohere ịhụchalụ nke ọ bụla. Ọzọkwa, tinye akara ngosi vidiyo n'ime vidiyo niile maka mmata akara. Buru n'uche na ị naghị etinye ọdịnaya na vidiyo ọ bụla nwere ike zoo n'azụ akara mmiri gị.
Basic Info - Nye nkọwa dị ukwuu maka ọwa gị nke na -araba ndị ọbịa ka ha lee ma denye aha na ọwa gị. Ozugbo ị nwetara ndị debanyere aha 100 na ọwa gị anọla ụbọchị iri atọ, jiri aha otutu hazie URL gị ka ọ bụrụ igodo pụrụ iche nke YouTube na -enye. Nke kachasị mkpa, gbakwunye njikọ na ozi gị nke na -akwagharị ndị mmadụ na saịtị gị ma ọ bụ ọwa mmekọrịta ndị ọzọ.
Intro - Ntinye siri ike kwesịrị itinye ụda maka ihe kpatara ndị mmadụ ga-eji na-ele vidiyo gị. Ọtụtụ ndị na-ekiri ha na-elele sekọnd ole na ole wee pụọ. Webata akara gị ma gwa ndị mmadụ ihe ha ga-amụta ma ha jigide.
Details - Ozugbo ibugo vidiyo gị, ị ga -ahụ na enwere ọtụtụ nhọrọ maka ịkọwa ozi dị na vidiyo gị. Ọ bụrụ na ị na -adọta ndị na -ege ntị mpaghara, ị nwere ike tinye ebe na vidiyo gị n'ezie. Dejupụta nkọwa niile ị nwere ike, ọ na -enyere aka hụ na edepụtara vidiyo gị nke ọma wee chọta ya! Jide n'aka na ịhazi vidiyo gị ka ọ bụrụ listi ọkpụkpọ.
tọmbneelụ - Ozugbo ị nyochachara ọwa YouTube gị site na nọmba ekwentị, ị nwere ike hazie obere vidiyo vidiyo ọ bụla. Otu ụzọ dị ịtụnanya isi mee nke a bụ ijikọta aha gị na onyonyo vidiyo, lee ihe atụ si Crawfordsville, Indiana Roofer anyị na -arụ ọrụ, Ọrụ ụlọ Cook:
Description - Etinyela ahịrị ma ọ bụ abụọ, dee nkọwa siri ike nke vidiyo gị. Ọtụtụ vidiyo na -eme nke ọma gụnyere ihe niile ntụgharị vidiyo n'ozuzu ya. Inwe nkwado ọdịnaya na ibe ọ bụla dị mkpa… na Youtube ọ dị oke mkpa.
Captions - Ọtụtụ ndị mmadụ na -elele vidiyo nwere ụda dara. Zipụ vidiyo gị maka nkọwa okwu ka ndị mmadụ wee nwee ike gụọ ya na vidiyo ahụ. Ịkwesịrị ịtọ asụsụ nke vidiyo gị yana ntụgharị ya, mgbe ahụ ị nwere ike bulite otu SRT faịlụ nke ahụ kwekọrọ na oge vidiyo.
Echiche - Ị ka emebeghị! Na -akwalite vidiyo gị ebe niile… na blọọgụ, na ibe weebụ, na netwọkụ mmekọrịta yana ọbụlagodi akwụkwọ akụkọ. Ka nlele vidiyo gị na -enweta, ka ọ ga na -ewu ewu. Ndị mmadụ na -elekarị vidiyo nwere nlele ma na -amafe ndị nwere obere echiche.
Mapma vidiyo - Ọ bụrụ na vidiyo bụ akụkụ dị mkpa nke saịtị gị, ị nwekwara ike mepụta vidiyo saịtị mgbe ị na-ebipụta ha na weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ gị. Ihe odide vidiyo gunyere web peeji nke tinyere vidiyo, URL na ndị egwuregwu maka vidiyo, ma ọ bụ URL nke ọdịnaya vidiyo na-akwadoghị na saịtị gị. The sitemap nwere aha, nkọwa, play peeji nke URL, thumbnail URL, na raw video faịlụ ebe, na / ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ URL.
Ngosipụta: M na -eji njikọ njikọ m Rev, nnukwu ọrụ maka ntụgharị vidiyo na ntinye ederede.
Tags: mmechi okwumechie ihe nchịkọtagoogle webmastergoogle webmaster ngwaọrụebuli gị youtube videoebuli youtubesrt faịlụvideo emechi captionnjikarịcha vidiyovidiyovideo Sitemapntụgharị vidiyovidiyo xml saịtịNyocha YouTube chanelnjikarịcha youtubeyoutube videonjikarịcha vidiyo vidiyo